बडादशैंको शुभकामना – Quick Khabar
Loading... आजः ६ माघ २०७८, बिहीबार । Thursday 20th January 2022
स्वस्थानी व्रत र महिमा
जन्माेत्सवमा राप्रपा महिला संगठनकी अध्यक्षले गरिन विपन्नलाइ सहयाेग
थप ६७३४ जनामा कोरोना संक्रमण, तीन संक्रमितको मृत्यु
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले ग¥यो १२ बुँदे आदेश
‘कर्नाली ब्लुज’ को अंग्रेजी अनुवाद : के नेपाली साहित्यले विश्वबजारमा फड्को मार्दैछ ?
एमाले प्रदेश ईन्चार्ज कंडेलले पार्टी कब्जा गर्न खोजे- नेता शर्मा
एमाले अध्यक्षमा अमृत विसी विजयी
अविधेशनका प्रतिनिधिहरु सक्षम हुनुहुन्छ : शर्मा
२०७८ आश्विन २६, मंगलवार १७:४० मा प्रकाशित
नेपालीहरूको महान् चाड बडादशैँ सुरु भइसकेको छ । यस वर्ष अर्थात् २०७८ सालका पर्वहरु मध्य अहिले हामी दशैँको बीचमा छौं । दशैँ नेपालको राष्ट्रिय पर्व हो । घरबाट टाढा गएर बसेकाहरू घर सम्झेर आउने पर्व दशैँ हो । जहान परिवारलाई केही वर्ष वा धेरै वर्षको बिछोडपछि भेटघाट गराउने चाड भएकाले यसको विशेष महत्व छ ।
ठूलाबडा र आदरणीय व्यक्तित्व वा मान्यजनबाट टीका र जमरा लगाइमागेर आशिरवाद थाप्ने दशैँ पर्वको ख्याति छ । पञ्चायत कालमा यस राष्ट्रिय पर्वमा सरकारले १५ दिनसम्म बिदा दिने गरेको थियो भने पछि प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले अन्य धर्मावलम्बीका अन्यान्य पर्वलाई समेत विभेदको व्यवहार नहोस् भनेर दशैँ बिदामा कटौती गरी अन्य पर्वमा बिदा दिने गरेको छ ।
दशैँ रमझमपूर्ण चाड हो । परदेशीहरू आफ्नो गाउँघर फर्किन्छन्, लाहुरबाट लाहुरे आउँछन्, रोटे र लिंगे पिङको रमाइलो हुन्छ । टीका र जमराको सर्वव्यापकतामात्र होइन माइत र मावल जानेहरूको लर्को गाउँघरका बाटाभरि देख्न पाइन्छ । यसका थालनिका अनेक कथाहरू जोडिने गर्छ । रामले रावणलाई विजय गरेपछि मनाउन थालेको भनियोस् वा देवीले दानवलाई मारेपछि त्यही खुशीयालीमा मनाउन थालिएको भनियोस् दशैँ धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले महान् चाड हो ।
तर, चाड मनाउन जान्दा त्यो चाड बन्छ भने मनाउन नजान्दा यस सँगसँगै अनेक खालका विकृति बढ्ने गर्छन् । खासमा देखासिकी गर्ने प्रवृत्तिले मानिसलाई ओरालो बाटोतिर धकेलिरहेको हुन्छ । हुनेले खर्च गरेको देखेर नहुनेले पनि त्यसको नक्कल गर्नाले एक पटक दशैँ मनाएको ऋण तिर्न एक वर्षसम्म मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिमात्र होइन कपितपयले त यस्तो ऋण तिर्न नसकेकेर अनेकौं नराम्रा व्यवहार अपनाएको र आत्महत्या जस्ता गलत बाटो लिएका उदाहरण पाइन्छन् । त्यसैले बुढापाकाले भन्ने गरेको घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने उपाख्यानको पालना गर्ने हो भने दशैँ दशा बन्दैन । पर्वमा रमाउने हो । रमाउँन धेरै पैसाको आवश्यकता पर्छ भन्ने होइन । आपूmसँग भएको थोरै पैसाले पनि रमाउँन सकिन्छ ।
त्यसैले दशैँलाई दशा बनाउनु हुँदैन । चाड भन्नासाथ मांस र मदिराको भेलबाडी लगाउनुपर्छ भन्ने होइन । स्वास्थ्यको ख्याल नराखी चाड मनाउनाले चाडमा पनि खर्चको मात्रा बढ्नजान्छ र स्वास्थ्य बिग्रियो भने उपचारमा पनि पैसा खर्च हुन्छ । अर्कोतिर खेलबाड गरेर पैसा उडाउने प्रवृत्ति धेरैमा रहेको छ । यस्ता व्यवहार पर्वका नकारात्मक विशेषता हुन् र यी विकृतिले पर्वमा रौनक थप्दैन । पर्व रमाइलो बनाउन त परिवारसँगै बसेर हाँसी खुशी आपूmसँग जे छ त्यसैमा रमाउनुपर्छ । अनावश्यक आडम्बरी व्यवहार त्याग्नाले जीवन उच्च बन्नजान्छ । जो जो जहाँ–जहाँ छौं त्यहीँ त्यहीँ रहेर खुशी आदानप्रदान गरौं, सुखी रहौं खुुशी रहौं । हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता, लेखक, पत्रकार तथा हाम्रा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूमा महान् पर्व बडादशैँको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ ।
खसान मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालित
क्वीकखबर डटकमका लागि
सञ्चालक/सम्पादकः खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी
सूचना विभाग दर्ता नं. 0000
वीरेन्द्रनगर–११ सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश